10-kaan Ficil Hadaad Xaaskaaga Kula Dhaqanto Waxaad Tahay Nin Xun - Daryeel Magazine
10-kaan Ficil Hadaad Xaaskaaga Kula Dhaqanto Waxaad Tahay Nin Xun
Nin kastaa maaha say xun, balse waxa jira waxyaabo aan fiicnayn oo uu sameeyo, loona baahan yahay inuu iska ilaaliyo si aannu guurkiisa u waxyeelin amma qoyskiisa u burburin, sababtoo xaaskaagu waxay u qalantaa inaad ula dhaqanto sida aad rabto in laguula dhaqmo.
2. Xakamaynta amma Kantaroolida joogtada
3. Inaad ula dhaqanto sidii ay tahay shay aad leedahay:
4. Waqti oo aad la qaadan waydo:
5. Luqad adag amma aflagaado ha kula hadal:
6. Inaad xaaskaga barbar-dhigto haweenka kale:
Waxaad u noqotaa mid naxariis badan, samir badan, cafis badan, aadna ugu jilicsan oo aan go’aanno adag ka qaadan. Inta badan ee aad waxyaabaha taban amma wanaagsan aad ku dhiirrigelisaa waa inta ay aad uu jeceshahay kuuna soo dhaw dahay.
7. Guriga shaqada taal oo aad ka caawin waydo, ceebna u aragto:
Waxa laga yaabaa inaad dakhliga guriga soo galaya oo dhan keento dhammaantii amma qayb ka mid ah, laakiin taas macnaheedu maaha in aanad xaaskaaga ka caawin karin shaqada guriga. Waxaad mararka qaar ka dalbataa inaad caawiso oo la nadiifiso wixii aad karto, taasina waxa ay adiga iyo ooridaada idinka dhigaysa koox amma dad wada shaqayn leh oo is fahmi kara, riyadoodana ka rumayn kara, gurigooduna noqdo mid ka nadiif iyo wanaag badan guryaha kale ee aan farxaddaas idinla qabin.
8. In uu inta badan cadhoodo:
Marka uu ninku xaas yeesho waa nin koray, inuu xaaskiiga ku qayliyo maaha wax fiican amma midho-dhal leh. Dilistu waaba mabnuuc. In aad dhirbaaxdo, riixdo amma aad alaab ku tuurto dhammaantood waa arrimo xad-gudub ah. Qoysku waxa uu ninka bara sida cadhada loo xakameeyo, loona noqdo hayin. Waxa uu barta sida degenaanta loogu jawaabo iyo waliba kalgacalka, waana cashar nololeed, hadduu intaas khibrad ka helana nolosha dibada iyo ta qoyskiisba wuu ku guulaysan kara, haddii kalena buuq iyo rabshad kama baxo.
9. Khiyaamada iyo beenta:
Haddii aad damacdo inaad arrimo u baahna inaad u sheegto ka qariso amma khiyaamo ku kacdo, kuna fikirto in aanay ogaanayn waad iska ciyaaraysaa, sababtoo ah shay kasta oo xun waxa uu aakhirka u soo baxa dibadda, xataa haddii aanay ogaan khiyaamada aad ku kacday waa wax khaldan. Shay kasta oo macno leh ha ka qarinin amma qoyskiina faa’iido u lahaa. Dooro inaad daacad noqoto, una noolow inaad fuliso ballamaha aad ooridada ka qaadday, intaas iyo in ka badan ba way u qalantaaye.
10. Hadyad la’aanta:
Hadyad la’aantu waxay haweenka u tahay wax aan fiicnayn, balse haddii saygu uu xaaskiiga haba yaraatee marar aanay ogayn kaga farxiyo hadyad uu qalbigiisa uga gartay waxay u noqotaa mid aad u muhiim ah, waxaanay xoojisaa xasuusta jacayl iyo isku xidhnaanta.
W/Q: MM Kastan
Waxaad U Baahan Tahay Qof Ku Fahma Oo Riyo Kula Wadaaga 3 Baadhitaan Oo Ay Waajib Ku Tahay Nin Kasta Inuu Si Joogto Ah U Sameeyo Si Uu Caafimaadkiisa U Hubiyo Xeelad Aad Caadooyinka Xun-Xun Iskaga Goyn Kartid Kuwo Wanaagsanna Ku Samaysan Karto Ramadaanka 15-ka Ficil Ee Laga Doonayo Hal-Abuuraha Ganacsi Yar